Ankizilahy sy kilalao! | Martech Zone
Ankizilahy sy kilalao!
Talata, Oktobra 24, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Tsy azoko antoka hoe ohatrinona no mihoatra ny azoko alaina! Internet Explorer 7, FIrehio 2, ary MacBook Pro rehetra ao anatin'ny herinandro. Ao ambadiky ny RSS RSS aho tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra an-jatony vitsivitsy, ao amin'ny mailaka nataoko tamin'ny mailaka 200 teo ho eo… ary manana asa betsaka kokoa noho ny taloha aho. Inona no mitranga eto amin'izao tontolo izao?
Voalohany… Internet Explorer 7. Tena mahaliana ahy ny toerana misy ny menio sy ny fandaminana ny efijery. Raha mbola tsy nanandrana ianao dia mahafinaritra ny efijery feno. Ary, mazava ho azy, tsara ny fandraketana.
Faharoa… Firefox 2. Vao avy nampidina azy aho. Tena zippy! Tiako ity. Tsy mbola nanandrana ny tsipelina aho fa henoko fa endri-javatra tsara izany. Midika izany fa afaka manary ny Google Toolbar aho.
Fahatelo… azafady…! Ny MacBook Pro. Nahazo ny sanganasa tamin'ity alika kely ity aho ary nalazo ilay 'cool factor'. Mazava ho azy, taorian'ny nividianako azy dia tsy maintsy nandeha nividy kitapo laptop vaovao mahafinaritra sy malama aho. Mbola eo am-piandrasana mpanara-maso biby goavambe aho any am-piasana… saingy tsy ampy herinandro akory dia saika niova fo tanteraka aho.
Nampidiriko Parallels teo (WOW!) Izany mba hahafahako mihazakazaka XP rehefa mila amin'ny efijery iray (na eo am-baravarankely) sy OSX amin'ny lafiny iray hafa aho. Manenjika ahy fotsiny izany. Heveriko fa tsy ho Windows Cripple mandritra ny fotoana ela aho. Tokony holazaiko anao amin'ny endrika sy fahatsapana, OSX dia mandroso lavitra amin'ny fijery, fahatsapana ary fahaiza-miasa. Tsy snob Apple aho (mbola), fa afaka nanjary iray. Heveriko fa tamin'ny fotoana nanokafako azy voalohany tao amin'ny Border, dia ho iray amin'ny fomba ofisialy aho!
Zavatra sasany tsy tiako amin'ny Mac? Ny tady herinaratra mahery dia mangatsiatsiaka ary rehetra, fa ny tendrony hafa kosa mahasosotra… famatsiana herinaratra mahery vaika. Ary nohamafisin'izy ireo loatra ny tadin'ny fanitarana. Volavola be dia be ho an'ny tongotra kely.
Email 2.0 - Fampiharana Internet manankarena, haino aman-jery maro, antontan-taratasy miharo?
25 Oktobra 2006 à 6:53
Ny saka sy alika voalohany miara-miaina ary ankehitriny i Doug amin'ny MAC?! Enga anie ka tsy hisy izany!
Mampihomehy, vao omaly ny mpamorona sary (MAC boy) sy ny Talen'ny serivisy Internet (PC boy) dia nahatsapa fa tena zava-kanto manahaka ny fiainana izy ireo. Novana (farany) ny fomba fiakanjonay birao mba tsy ho voatery hanao karavato izahay. Tamin'ny andro voalohan'ny lalàna vaovao, tonga niasa tsy misy fehiloha ny zazalahy MAC, saingy nanao karavato ihany ny zazalahy PC. LASA ny varotra Apple izy ireo.
Raha ilaina ny fitadidiana, Doug, mahatsiaro ho manan-danja kokoa ianao ao anaty suite. Ka izany no mampametra-panontaniana hoe, tsara kokoa ve ny mahatsiaro ho manan-danja, sa mangatsiaka?